Shot blasting machine Factory - China Shot blasting machine mpanamboatra, mpamatsy
Masinina paompy elektrika Piston Air compressor HST-3.2 / 7
Ny compresseur rivotra avo lenta indostrialy dia ampiasaina amin'ny hidin-trano pneumatic, fitaovana pneumatika, fiakaran'ny vidin'ny kodiarana
tsofina, famafazana loko, famaohana fasika ary singa mihetsika. karazana endrika lehibe an-doha, ampiasao tsara
ampy fitaovana. Fanamafisana ny famolavolana ho an'ny singa lehibe, ny refin'ny tànany
wvalo mihoatra ny ozinina hafa, fiarovana avo lenta ary haingam-pandeha, mety indrindra amin'ny adidy mavesatra
asa maharitra, indrindra ny fahamendrehana avo lenta sy ny androm-piainana maharitra.
Indrindra ny famolavolana rivotra sy ny fikorianan'ny rivotra, ny hafanana ambany, tsy mora amin'ny fametrahana karbonina sy ny fahombiazany.
Ny fampiasana valves azo antoka voaisy tombo-kase dia miantoka ny filaminan'ny asa.
Vokatra azo alaina amin'ny bar 30 & 40 mba hifanaraka amin'ny tavoahangy PET roa amin'ny hatevin'ny rindrina samy hafa.
Ny fikorianana mitohy dia miantoka ny famokarana maharitra ny tavoahangy PET.
Vokatra sahaza indrindra ampiasaina amin'ny milina fitahirizana tavoahangy PET.
Voatifitra nanapoahana fehikibo vita amin'ny fehin-kibo, faritra notifirina Blaster
Hamafisana (Shore A) 63 ° C ± 3 ° C
Hery matanjaka 20.0MPA
Elongation amin'ny fiatoan'ny 500%
Elasticity ny 52%
Herin'ny ranomaso 68.6KN / M
Ny coefficients efa antitra an'ny (70 ° C / 72H) 0.91
Ampiasao amin'ny milina fanapoahana Track Shot na milina fanapoahana Track Sand
Hook Type Head Rail Shot Blasting Machine amin'ny fanadiovana gorodona Q376 Q378 Q3710 Q3720
Q378 Karazana faribolana voatifitra masinina
1.Ny firafitry ny efitrano fipoahana tifitra sy ny fandaminana ny milina fanapoahana tifitra dia voasarika avokoa
amin'ny alàlan'ny famolavolana solosaina (CAD), izay mitombina kokoa.
2.Natsaraina ny tahan'ny fampiasana projectile, azo antoka ny vokan'ny fanadiovana
ary mihena ny abrasion amin'ny takelaka fiarovana ny vatan'ny efi-trano.
3.Ny turbine kodiarana fantsom-pandrefesana cantilever (Q034) miaraka amin'ny
habetsaky ny fipoahana be dia be ary ny hafainganam-pandeha avo be afaka
manatsara be ny fahombiazan'ny fanadiovana ary mahazo kalitao fanadiovana mahafa-po.
Crawler Belt Shot Blasting Machine, Crawler fasika blaster Q324 Q326 Q3210
♦ Fandefasana ferro sy tsy ferrous
♦ Famonoana hafanana voadona
♦ Fitaovana fiara kely
♦ Maty fanariana ary maro hafa
♦ Tsy olana ny fizarana sanda ambany kokoa eo anelanelan'ny ampahany
♦ Rehefa mitaky fikarakarana batch ny famokarana
♦ Fandefasana, fametahana ary faritra voatsabo hafanana
♦ Fanesorana fasika na fanadiovana ampahany
Inverter matetika ho an'ny mpampita horonan-taratasy, kodiarana fipoahana, rafitra fanodinam-bolo mahery, tontonana fanaraha-maso nomerika,
tsy voatery namboarina mandeha ho azy ny rafitra fampidinana sy famoahana entana, mpanangona vovoka.
Ity milina ity dia natao ho an'ny fanadiovana na fanamafisana ny fikolokoloana fanodinana kely, fananganana faritra amin'ny indostria fandrafetana, fananganana, simika,
motera, fitaovana milina sns. Manokana amin'ny fanadiovana ny tany sy ny fanamafisana ny karazana isan-karazany izy io
casting kely famokarana, forging faritra sy vy fananganana faritra ho an'ny famafana kely viscous fasika
fasika fasika sy hoditra oksida. Izy io koa dia mety amin'ny fanadiovana ny tany sy fanamafisana ny faritra fitsaboana hafanana, indrindra amin'ny fanadiovana kely, ampahany amin'ny rindrina manify izay tsy mety amin'ny fiantraikany.
Voatifitra tamin'ny tifitra masinin-tsipika momba ny masinina Pill / Blades / Abrasive
Points pill of Shot blasting machine no anjara asan'ny abrasive kodiarana araky ny fangatahana sasany voatondro voatondro ho an'ny lelany
manondro ny fisokafan'ny pilina raha vao manao akanjo matotra sy marokoroko dia hahatratra ny faran'ny ravina, akanjo tsy ara-dalàna,
Ny fikorianan-tsolika mahery vaika dia tsy ho lasa fitsipika intsony, hijerena matetika ireo teboka mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny famaritana ny kodiarana pilina amin'ny fotoana ilana hanaovana maru matotra.
Ny famaritana ny toerana fisokafana dia mamaritra ny toerana misy ravina misaratsaraka ny pilina, manodina ny fironana amin'ny endrika bikan'ny vava ny fiovaovan'ny abrasive sy ny haben'ny faritra mafana
dia miparitaka abrasive abrasive dia mifantoka amin'ny velaran'ny faritra iray, ateraky ny fanaparitahana abrasive amin'ny lelany
ny fipetrahana orientation azo ovaina amin'ny fametrahana dia mety mifanaraka amin'ny akanjo sy ny triatra amin'ny fanitsiana fanokafana. fiantohana izay nanipy ny lohan'ny lohan'ny masinina notifirina teo ambanin'ny fiasan'ny olana ara-pitaovana.
Ao ambadiky ny lohan'ny ravina sy ny fifandraisana mivantana mahery vaika, ny kalitaony dia mifandray akaiky amin'ny fanipazana ny fahombiazan'ny loha.
mitafy fanoherana ny volo dia manapa-kevitra mivantana ny ain'ny serivisy sy ny vidin'ny milina famaohana
manipy ny lohan'ny lelam-bolo dia ny fampiasana fitaovana fanoherana avo lenta, ny fanoherana ny lelan-tsolika tsy misy ifandraisany amin'ny fitaovan'ny lelany
mifandraika akaiky amin'ny fepetra miasa amin'ny milina fipoahana.
Voatifitra fitifirana impeller
Direct Shot dia kodiarana fipoahana vaovao sy mahomby, miaraka amin'ny bika aman'endriny, firafitra matevina, tabataba ambany
endri-panavotana angovo sy fiarovana ny tontolo iainana
MODELY savaivony Hafainganana Tifitra variraraka lehibe indrindra fahefana